एनआरएन इजरायल भित्र को, कसरी र कहाँ अटाउने ??? :: a1nepal.com.np
एनआरएन इजरायल भित्र को, कसरी र कहाँ अटाउने ???
- निर्मला खड्का, इजरायल
– निर्मला खड्का, इजरायल
निर्मला खड्का, इजरायल
केही दिन यता निकै रनक्क गरी गैर आवासीय नेपालीहरूको हौसला रन्केको छ । चुनाव हुँदै छ । जित्ने चाहमा साथीहरू कुन कुन बाटो हिड्दैछौँ भन्ने नै हेक्का नराखी दौडी रहेको देख्दैछु ।
तेह्र वर्ष देखि विदेशमा बसेको हैसियत राख्दै मैले पनि गैर आवासीय नेपालीहरूको चुनावी दौडमा एउटा भोटरको रूपमा नाम दर्ता गराएँ । हुन त दुई वर्ष अघि पनि मैले भोट हालेकी थिएँ । अझ निर्वाचन समितिको अनुरोधमा स्वयम् सेवकको रूपमा पर्यबेक्षक हुने सौभाग्य पनि पाएँ । त्यसले मलाई कति उचाइमा पुर्यायो त्यसको मापन नगर्दा नै हुन्छ । दिइएको जिम्मवारी खै कति निभाएँ तर विवाद नआए पछि काम गरेकोमा सन्तुष्ट भईयो । त्यो बेला मैले त्यो सबै गर्नु सुनियोजित रणनीति थिएन । म गैर आवासीय नेपाली संघ संग आबद्ध भएर या रहेर गरेकी पनि हैन । म स्वयम् सेवकको बिल्ला भिरेर काम गरेको थिएँ ।
अहिले पनि २०१७/१९ को लागी इजरायलमा चुनावको लू चलेको छ । मलाई थाहा छैन गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नीति के हो । यसको विधान के छ । यस्तै गरेर यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् र सबैका उद्धेश्यहरु के हुन् । तर सबैले भने झैँ केही गर्न भनेर अगाडी आए होलान् भन्ने भनाइमा समर्थन मै बसियो । सामान्य नेपाली हुनुको हैसियत राख्दा र म ती सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुँदा ती सङ्घ संस्थाका नीति नियम र उद्धेश्यबारे जानकारी राख्नु पर्थ्यो । सबैले राख्न सक्नु पर्छ । मैले आबद्धता राख्ने आवश्यकता देखिएन र राखिन । तर आबद्ध नभए पनि मेरो बलबुताले भ्याएसम्म र मेरो समयले दिएसम्म मैले सबै कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति जनाएको छु । त्यसको फोटो प्रमाण छैन मसँग । गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चुनावमा एउटा नेपाली भएको नाताले अझ प्रस्ट भन्नु पर्दा उमेद्वारहरुको हकमा साथीहरू चुनाव लड्दै गर्दा एक भोटको महत्त्व हुन्छ भन्ने सोचले नाम दर्ता गरेकी थिएँ । यसमा कसैको दबाब थिएन ।
यही क्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले चुनावको पहल गर्दा मैले साथिबाद निभाउन खोज्नु मेरो कमजोरी पक्कै हो । मैले स्वीकार्छु । यो नाताबाद,कृपाबाद जस्ता बादहरु हट्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मैले ,आफैले त्यही गोरेटो पछ्याउनु गलत हो । यसको लागि म कुनै कुरा सुन्न सक्दछु र सजाय खेप्न पनि तयार छु । र यही गल्तीबाट मैले धेरै सिकें पनि ।
अगस्ट ११ तारिखका दिन एउटा साथीले मलाई (नाम गोप्य )फोन गरेर “यसरि पासपोर्ट नम्बर बाहिर निकाल्न मिल्छ र ?” भनेर सोधिन । मैले सामान्यता जानकारी राखे अनुसार मिल्दैन भनेर भने । उनले निकालिएको छ । मेरो नेपालमा अनेक समस्याहरू छन् । किन निकालेको होला भनेर गुनासो गरे पछि मैले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको निर्वाचन समिति इजरायल निर्वाचन समितिका सचिव दिपेन्द्र थापा जसले पासपोर्ट नम्बर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु भएको थियो त्यहाँ गएर कमेन्ट गरेँ । यसरि अनेक साथीहरू आफ्नो साथीलाई भोट दिने नशामा आफ्नो गोपनियता गुमाउन पुगेका छन् । र अनेक समस्यामा महिला मात्र नभई पुरुषहरू पनि छन् ।
यसरी पासपोर्ट नम्बर पब्लिकमा पोस्ट गर्न मिल्छ ?
कुन कानुनले दियो ?
कुन नियम अन्तर्गत गर्न पाइन्छ ?
गोपनीयता हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
मलाई मेरो पासपोर्ट नम्बर यसरी बाहिर ल्याईएकोमा आपत्ति छ ।
कुनै दुर्घटना भएमा जवाफदेही को हुने ?
यसमा एन आर एन इजरायल निर्वाचन समिति, सम्पूर्ण उमेदवार सहित सर्वसाधरणको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु ।, यसको जवाफ चाहन्छु ।
मेरो कमेन्ट यस प्रकारको थियो । मैले कमेन्ट गर्नुको उद्धेश्य निर्वाचन समितिको यसमा ध्यान जाने छ र त्यसलाई हटाएर यसरि पासपोर्ट नम्बर बाहिर आउँदा पर्न गएको असुविधा र अब आउने दिनमा यसो नगरिने या नगरियोस भनी सम्बोधन होस् भन्ने थियो । तर केही घण्टा बित्दा र मैले राखेका कुरा जायज हुन् भनेर कमेन्ट आउँदा पनि निर्वाचन समितिले बेवास्ता गरे पछि त्यसै कमेन्टलाई मैले मेरो फेसबुक वालमा पनि राखेकी थिएँ ।
म निर्मला खड्काले सामाजिक सञ्जालमा सम्पूर्ण मतदाताहरुको पासपोर्ट नम्बर बाहिर आए पछि त्यसबाट पर्न जाने अफ्ठेराहरुलाई मध्यनजर राख्दै धेरै साथीहरूको त्यसरी पासपोर्ट नम्बर सार्वजनिक नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्ने उद्धेश्यले माथिका प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्ति सहित निर्वाचन समिति र एनआरएन इजरायललाई राखेकी थिएँ । मैले सबैको समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास गरेकी हुँ । तर दुखको कुरा मैले मेरो कुरा सम्प्रेषण भएको बाह्र घण्टा भन्दा बढी भैसक्दा पनि कतै बाट जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ आएन ।
हो भोलि पल्ट समितिसदस्य सुवास खरेल जीले सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नु भयो र हाम्रो फोनमा कुराकानी भयो । उहाँ इजरायल बाहिर हुनुहुन्थ्यो उहाँले भने अनुसार ।
“ निर्मला सिस्टर हजुरले उठाएको कुरा जायज हो । पहिला पनि हामीले गरेका थियौ । त्यस बेला कसैले यो कुरा औंलाउँन सकेन । अहिले हजुरले उठाउनु भयो । खुसी लाग्यो । हामी पनि हजुर जस्तै सामान्य मानिस हौँ । गल्ती गरेरै सिक्ने हो । सिक्यौं । मैले हजुरको कुरा निर्वाचन समिति र अन्त पनि राखी सके । हजुरसँग कुरा गर्ने छन् । तर दुखको कुरा त्यहाँ यो गलत हो भनेर कमेन्ट गर्नेहरु ( नाम नलेखु ) जो पहिल्यै देखि यस संस्थासँग सम्बन्धित छन् र यही काम गरेर अघि बढेका हुन् , उनीहरूलाई थाहा रहेछ गलत हो भन्ने भने उहाँहरुले त्यो गल्ती किन भयो र हामीलाई किन सिकाएनन् र किन सुधार्न लगाएनन्“ भनेर भन्नु भएको थियो ,उहाँको कुरा पनि न्याय सङ्गत छ |
“ सुवास जी,गैर आवासीय नेपाली सङ्घ संस्था भित्र को को छ / के के हुन्छ र भएको छ त्यो मेरो चाँसोको विषय हैन । हजुरले यो प्रश्न त्यहाँ भित्र गर्न सक्नु हुन्छ बरु ।“ मैले भनेको शब्द यिनै थिए |
“ सिस्टर म बाहिर छु । म आएर हजुरलाई सम्पर्क गर्छु र यो विषयको कुरा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भित्र गर्छु ।“ भन्नु भएको थियो । उहाँले समिति र संस्थाका साथीहरूसँग कुरा गर्नु भयो या भएन थाहा छैन । तर त्यस पछि मेरो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन । बरु मैले नै अर्को दिन सुवास जी भनेर फेसबुकमा बोलाएको थिएँ । हेर्नु भयो जवाफ दिनु भएन ।
सुवास जीसंग कुरा भएको केही घण्टा पछि मलाई दीपेन्द्र जीले सम्पर्क गर्नु भयो ।
“ तपाईँ कहाँ हो “ उहाँको पहलो सम्बोधन यस्तो थियो । नेपाली हुनुको संस्कार र सभ्यतामा हामी पहिले नमस्कार भनेर बोल्न जान्ने भएका छौ । तर उहाँको संस्कारमा यो रहेनछ ।
म काममा छु भनेर भने पछि उहाँले हजुरले कुरा बुझ्नु भएको रहेनछ भनेर बुझाउने कुरा गर्नु भयो । मलाई उहाँसँग लामो सम्बाद गरेर बस्नु थिएन । मलाई बुझ्नु छैन भनेर फोन काटें । फेरी फोन आयो । उठाएँ ।
“हामीले यही गर्दै आएका छौ । हाम्रो विधानमा जे छ त्यही गर्छौं । तिमीलाई समस्या छ भने तिम्रो नाम हटाई दिन्छु । तिमीले भोट हाल्न सक्दिनौ ।“ तपाईँबाट झरेर तिमीमा आई पुग्दै उहाँको कुरा यस्तो थियो । उहाँले मसँग गरेको फोनवार्ता पछि उठेका थप प्रश्नहरू छन् ।
के गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विधान, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्दा माथि छ ?
निर्वाचन समितिमा बस्नेहरुले आफ्ना भोटरहरुसंग गर्ने व्यवहार यही हो ?
के यही हो गैर आवासीय निर्वाचन समितिको आचारसंहिता ? के मैले सोधेका प्रश्नहरू गैर जरुरी हुन् र गलत छन् ?
के एनआरएन जस्तो संस्थाले कुनै पनि सर्वसाधरणको जिज्ञासालाई नजर अन्दाज गर्नु ठिक हो ?
छाता सङ्गठन भन्ने अनि छाता ओढाउँदा आफ्नै मनोमानीले आफै मात्रै ओढ्ने हो र ? संस्था स्वतन्त्र स्वचालित हो या कुनै माफियातन्त्रबाट सञ्चालित हो ? आफ्नै मनोमानीबाट चल्ने हो भने चुनाव किन गराउन पर्‍यो ?
यी कुराहरूमा एनआरएन इजरायल निर्वाचन समिति, सम्पूर्ण उमेदवार सहितको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहना राख्दै अझै पनि चित्त बुझ्दो कुराको अपेक्षा गर्दछु ।
त्यसबेलाको दिपेन्द्र जिसंगको फोनवार्तामा उहाँको एकहोरो मुढे कुरा सुन्दा मेरो धैर्यता रहेन । मैले चर्केर तपाईँको कुनै कुरा सुन्नु छैन भने । त्यस पछि उहाँ तपाईँबाट तिमीमा उत्रिनु भो ।
“ तिमीलाई मात्र लेख्न बोल्न आउँछ । अर्काको वालमा गएर किन जे पायो त्यही कमेंट्स गर्ने । किन अश्लील लेख्यौ ।“ भनेर चर्किनु भयो ।
“मैले के अश्लील लेखे ? के निर्वाचन समितिसंग प्रश्न सोध्नु अश्लील मानिन्छ ।“ यस्तै कुरा गर्दा उहाँले सास फेर्न बिर्सेर कराउन थाले पछि मैले दोस्रो पटक पनि फोन काटी दिएँ ।
त्यस पछि मैले फेरी पहिलेकै मेरो स्टाटसमा कमेन्ट गरेँ र सम्बन्धित साथीहरू साथै महिला हक हित र न्यायमा बोल्ने नारा बोकेर चुनावी मैदानमा आउनु भएका महिला दिदीबहिनीहरु र यहाँका केही मिडियाकर्मी साथीहरू सबैलाई ट्याग गरेँ । त्यहाँ केही साथीहरूले लेखेको कुरा अझै पनि छ ।
त्यहाँ केही साथीहरू बाहेक कसैले पनि चाँसो देखाएको जस्तो लागेन । र अब यस पछि अरू थप प्रश्न उब्जे ।
“ के यहाँका अनलाई मिडिया पनि तिनैका मातहतमा हुन् ?” हो भने स्वतन्त्र पत्रकारको बिल्ला नभिरौ । होइनौ भने यसलाई सम्बोधन गर्नमा पहल गर्नु पर्थ्यो । कसैले उठाउन नसकेको मुद्दा मैले उठाएको थिएँ । तर यो मेरो मात्र मुद्दा थिएन । यसले असर मलाई मात्र गर्ने होइन ।
“महिला दिदीबहिनीहरु हाम्रा हक हित र अधिकारको लागि लड्न र हामीलाई न्याय दिलाउन अगाडी आउन चाहदै हुनुहुन्छ । के मेरो कुराहरू नाजायज हुन् /थिए ? र हजुरहरु मौन हुनुहुन्छ ?
कि म तेर्सो लिङ्गि हुँ जसलाई गरिएको दुर्व्यवहारले आत्मसम्मानलाई लागेको चोटले तपाईहरु दुख्न सक्नु भएन ?”
मलाई समितिभित्रको दिपेन्द्र थापा जीले गरेको व्यवहार असहनिय छ । पशुलाई त दुर्र्व्यवहार गर्न सक्दैन मानव हुनुको भावनाले भने म तेस्रो लिङ्गि भए पनि मानव नै हुँ ।
यहाँ मलाई न्याय कसले दिन्छ ?
दुई दिनसम्म यही कुरामा धेरै जना फोन सम्पर्कमा आउनु भयो र मैले पनि धेरैलाई फोन सम्पर्क गरेँ तर यसरि व्यक्तिगत अथवा व्यक्ति बिशेष संग कुरा गर्दै जाँदा धेरै कुराहरु अल्झिए । मैले निर्वाचन समितिसंग कुरा गरेर एउटा विज्ञप्ति निकाले पछि यो मुद्दा सकिन्छ र अर्को पटक यस्तो गल्ति नदोहारियोस भन्ने चाहना नै थियो मेरो ।
यसै बेला गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्ष दीपक प्रसाद ओली (आई सी सी चुनावमा उम्मेदवार भए पछि निवर्तमान हुनुहुन्छ भने मलाई थाहा भएन ) ले क्षमायाचना सहित कमेन्ट गर्नु भयो । म दीपक ओलीको पक्षधर पनि हैन । सही र गलतको कुरामा उहाँले नगरेको गल्ती तर संस्थासँग आबद्ध भएको भएर क्षमा माग्न सक्नुले एउटा सुल्झेको नेतृत्वको चित्र कोर्छ । उहाँमा यस्तै भावना रहोस् शुभकामना छ । तर पनि अन्यले कुनै सरोकार नरहेको नै जताए ।
अन्य साथीहरू र सहकर्मीहरुबाट पनि कुरा हुन् थाले पछि मसँग ग्रुपमा कुरा गर्ने भनेर फोन आएको रहेछ तर मैले फोन उठाईन । मसँग कुरा गर्न पर्ने केही छैन यहाँ । यो मेरो व्यक्तिगत मात्र मुद्दा पनि हैन । कुरा धेरै तिर हुँदा अझ कुरा थपिए पछि मैले यो लेखेर यसरि मिडियामा लेख्न बाध्य भएँ ।
मलाई दिपेन्द्र जिसंग कुनै व्यक्तिगत रिसईवी छैन । न त संस्थासँग नै छ । तर दिपेन्द्र जीले मैले राम्रोसँग कुरा गर्दा निर्मला नै अभद्र व्यवहारमा बोलेको हो भनेर उम्किदै हुनुहुन्छ रे ।
यदि यो हो भने दिपेन्द्र जीलाई चुनौती नै दिन मन छ ।
“ निर्मला अभद्र र असभ्य छ , कुरा गर्न जान्दिन र बुझ्दिन असंगत कुरा गर्छ ।“ भन्ने एक जना मानिस इजरायलमा देखाउनुहोस् र तपाईँले आरोप लगाए झैँ अश्लील कमेन्ट गरेको प्रमाण लिएर आउनु होस् । म सारा समुदाय अगाडी हजुरसँग माफी माग्ने छु र शिर झुकाउने छु । र हजुरको विरुद्धमा म प्रमाण लिएर उपस्थित हुने छु । तपाईँले पनि मैले जस्तै गर्नु पर्ने छ ।
म कुनै पनि राजनैतिक पार्टी र संस्थाको छाता नओढी पनि दुई खुट्टामा उभिएको छु । यदि कुनै पनि संस्था र राजनैतिक पार्टीले गलत व्यक्तिलाई छाता ओढाएर आफ्नो मातहतमा राख्छ भने उसको गल्तीको जिम्मेवार संस्था र राजनैतिक पार्टी पनि हुन्छ । मैले यी कुराहरू कुनै पनि पार्टीगत विरोध र व्यक्तिगत विरोधका कारण लेखेको हैन । गलत र सही कुरा सोधेको हो । यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनै पर्छ ।
← सरकारले बाढीपीडितलाई प्रतिव्यक्ति दैनिक ७० रूपियाँ दिने	उपत्यका निर्माण ब्यवसायी संघको प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न →